Naing BSell | Item - C1 ဆံပင်ပေါက် serum Price - 7000 ks / မှာယူလိုပါက. 09 407312405 09693544023 ph/ vibre Quality ကောင်းပြီး အထိရောက်ဆုံး ဆံပင်ပေါက်ဆေး အသုံးပြုချင်သူများအတွက် C1 လာပြီနော်။👉🏻ဆံပင်မပေါက်ထိပ်ပြောင်နေလို့ ဆံပင်ထိပ်ကွက် ဆံပင်ကျဲပြီး စိတ်ညစ်နေသူ
C1 ဆံပင်ပေါက် serum
Price - 7000 ks /
မှာယူလိုပါက. 09 407312405
09693544023 ph/ vibre
Quality ကောင်းပြီး အထိရောက်ဆုံး ဆံပင်ပေါက်ဆေး
အသုံးပြုချင်သူများအတွက် C1 လာပြီနော်။
👉🏻ဆံပင်မပေါက်ထိပ်ပြောင်နေလို့ ဆံပင်ထိပ်ကွက် ဆံပင်ကျဲပြီး စိတ်ညစ်နေသူများအတွက်
၇ ရက်အတွင်းသိသာစေတဲ့ဆံပင်ပေါက်ဆေး serum လေးပါရှင်။
သဘာဝသစ်ဥသစ်ဖုများရဲ့ အဆီအနှစ်တွေနှင့် ထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် ဦးရေထဲကိုစိမ့်ဝင်လွယ်ပြီး ဆံသားထွက်နှုန်းကိုလျင်မြန်စေပါတယ်နော်။
ခေါင်းလျှော်ပြီး ဆံပင် မခြောက်တခြောက်အချိန်မှာ C1 ဆံပင်ပေါက်ဆေးအဆီကို ဦးရေပြား အနှံ့
ဆံပင်အနေအထားပေါ်မူတည်ပြီး ၁ဘူးကုန် တာ နဲ့